Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGrant And Laura
Singathanda ukukwamkela eCraigrowan Croft apho sinegumbi elinomtsalane elinegumbi lokulala eli-2 lokuzenzela ukutya elibizwa ngokuba yi-An Sean Tigh (Indlu endala).
Inegumbi elinye lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokulala elinamawele, igumbi lokuhlambela elinebhafu eyahlukileyo kunye neshawari kunye nekhitshi elithandekayo / indawo yokutyela / indawo yokuhlala. Ixhamla kubushushu obuphantsi komgangatho kulo lonke kunye nesitovu esithambileyo se-multifuel sokugoba phambi kwayo.
Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ngefriji enkulu, ioveni yombane kunye nesitovu seceramic, umatshini wokuhlamba izitya kunye nazo zonke izixhobo zokupheka eziqhelekileyo. Ukwandiswa okuncinci ngasemva kukho umatshini wokuhlamba / owomileyo, i-iron kunye nebhodi yoku-ayina. Ngasemva kukho igadi encinci ephakanyisiweyo engasemva enentambo yokuhlamba ejikelezayo, i-charcoal barbeque encinci kunye netafile kunye nezitulo. I-cottage ine-fiber broadband.
Ukuba unabantwana abancinci sinoluhlu lwezixhobo ezikhoyo zokukugcina indawo exabisekileyo yokupakisha emotweni! Ezi ziquka i-buggy, i-cot yokuhamba kunye nezihlalo ezikhuthazayo ukuba abantwana abancinci bahlale kwitafile yesidlo sakusihlwa.
Kukho indawo yokupaka yasimahla ejikeleze i-cottage.
Icroft yenziwe ngeehektare ezilishumi elinesihlanu, ezintlanu kuzo bezisanda kulinywa ngomxube wemithi yemveli. Eminye ininzi yenziwe ngamadlelo arhabaxa, imithi ethile evuthiweyo, iintlobo ngeentlobo zeentyatyambo zasendle, ubulembu nobulembu kwaye kukho ukutyelelwa rhoqo okuvela kuluhlu lwezilwanyana zasendle eziquka amaxhama abomvu neentaka ezidla inyama.
4.94 · Izimvo eziyi-155
I-Strontian kunye neendawo ezijikelezileyo ziyinto yokuphatha abo bathanda izinto ezintle ngaphandle kunye nokuhamba okuninzi ukusuka kwiindawo ezipholileyo ukuya kwiindawo ezikhuthazayo zokunyuka iinduli. Kukho iingoma ezinokuthi zisetyenziswe ngabakhweli beentaba okanye iimayile zendlela ezolileyo enengoma enye enemibono emangalisayo kwabo bakhetha iibhayisekile zendlela. Kukho iinkampani ezisekelwe ekuhlaleni ezibonelela ngeekhenkethi ze-kayak kwi-Loch Sunart, ukuhamba kunye nokukhwela uhambo kunye nohambo lwebhayisikili olukhokelwayo.
Kukho iintlobo ngeentlobo zezilwanyana zasendle kwaye kukho indawo enkulu yokuzifihla enemibono ye-Garbh Eilean (iSiqithi esiHlubekileyo) esifumaneka emahlathini kwicala le-Loch Sunart kumganyana nje omfutshane. Amatywina aqhelekileyo ahlala ebonwa ekhwela ematyeni apha kwaye kukho intlanzi kwisiqithi esincinci esisecaleni kwayo.
Sihlala kwindlu eselumelwaneni ngoko ke sinokuqhagamshelwana lula xa kuyimfuneko.